▷ Cecotec Compact Rapid ▷ Falanqaynta, Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican 2022
Haddii aad raadineyso a Qalab Bilaash ah ka cufan sidii caadiga ahayd, Cecotec-kani wuxuu noqon karaa doorasho wanaagsan. Cabbirkeeda ayaa ka dhigaya shiil si fiican u shaqeeya oo loogu talagalay meelaha xaddidan iyo isticmaalayaasha aan u baahnayn awood badan.
Qalabka noocaan ah ayaa si xawli ah u korayay sanadihii ugu dambeeyay waxayna noqdeen kuwo aad u casrisan oo leh hawlo badan. Si kastaba ha ahaatee, qaabkani wuxuu qaadaa qaab-dhismeedka dhaqanka iyo naqshadaynta ku salaysan inta badan khaanadaha laga saari karo iyo qalliin fudud.
CusboonaysiiFryer-ka degdega ah ee Cecotec Compact lama heli karo. Halkan waxaa ah beddelkaada ugu fiican:
Haddii aad weli xiisaynayso Fryer Cecotec, maqaalkan waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato qaabkan, si aad uga dhigto iibsashadaada mid aad u ammaan badan. Waxaan arki doonaa tignoolajiyada ay isticmaasho, naqshadeeda iyo kuwa fikradaha kuwa iibsaday, iyo waxyaabo kale oo aan hoos ku faahfaahin doono. Aan raacno!
➤ Waxay iftiimisay Cecofry Compact Rapid
➤ Qiimaha Fryer Degdega ah ee Is haysta
➤ Faalloyinka Isticmaalaha
➤ Iibso Fryer Degdeg ah oo is haysta
Waxaan horeyba u rajeyneynaa in mid ka mid ah waxyaabaha u gaarka ah uu yahay cabbirkiisa yar, haddii aad rabto inaad ogaato mid kale oo ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan akhri oo waxaad ogaan doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan go'aansan inaad iibsato shiilan.
▷ 1,5 litir
Awoodeeda ayaa aad u xaddidan marka loo eego noocyada kale ee shiilan, gaar ahaan waxaad ku karsan kartaa ilaa 400 garaam oo baradho ah hal mar. Lacagtani waxay u dhigantaa ugu badnaan laba xabbo, taasoo ka dhigaysa qalab ku habboon lammaanaha ama keligoodba.
▷ 900 Watts oo Awood ah
Inkasta oo ay awooddeedu yar tahay haddaynu barbar dhigno noocyada kale, saamiga watts / awoodda ayaa ka mid ah kuwa ugu wanaagsan suuqa maanta. Tani waa inay hubisaa cunto karinta wanaagsan marka ay wax ku kordhinayso karinta. dhimista isticmaalka iyo biilasha korontada
Si loo xakameeyo heerkulka inta lagu jiro karinta, waxay leedahay a Heerkulbeeg analog ah oo u oggolaanaya in cuntada lagu kariyo inta u dhaxaysa 80 ilaa 200˚ haddii loo baahdo.
▷ Tignoolajiyada Perfectcook
Inkasta oo dhammaan shiilanyadu ay ku saleysan yihiin wareegga hawada kulul, nooc kastaa wuxuu isku dayaa inuu wanaajiyo natiijooyinka iyada oo loo marayo naqshado hagaajinaya socodka hawada gudaha. Xaaladdan oo kale, cecotec waxa ay baabtiisay sidii aad u kari lahayd naqshadeynta loo isticmaalo in lagu gaaro cunto karin degdeg ah oo isku mid ah.
▷ Jikada oo aan lahayn ur ama dillaac
Iyadoo la tixgelinayo in aad u baahan tahay saliid aad u yar si aad u kariso oo aad isticmaasho khaanad hawo-mareen, Jikadaadu waxay ahaan doontaa mid ka nadiif ah firfid iyo ur xun. Intaa waxaa dheer, walxaha la saari karo ayaa fududeeya dhaqidda, inkastoo calaamaddu aysan sheegin haddii ay ku habboon yihiin mashiinka weelka.
▷ Saacadaha 0/30 daqiiqo.
Tani Shiilan saliid-free cecotec Aad bay u fududahay in la isticmaalo tan iyo markii aan ku qasbanahay in aan nidaamino heerkulka iyo waqtiga la rabo iyadoo ku xiran habka loo kariyo. Saacadaha analoogga ah wuxuu u shaqeeyaa sida daaran wuxuuna sidoo kale damiyaa mashiinka isla marka wakhtiga la doortay uu dhaco.
Fryer sidoo kale waxaa ku jira muraayad xariir ah oo leh kula talin heerkulka iyo waqtiga ee nooc kasta oo cunto ah. taasi waxay u adeegi doontaa sida hage isticmaalka ugu horreeya.
Qaabkani waxa uu leeyahay nakhshad ovoid ah oo kooban oo la taaban karo oo loogu talagalay jikooyinka ugu yar, daacad u ah naqshadda dhaqameed ee Fryers-kii ugu horreeyay ee Saliidda Xorta ah, kuwaas oo lagu garto in ay haystaan ​​khaanad la saari karo.
Waxay ku qalabaysan tahay cago aan simbiriirixan lahayn, bannaankana waxaa u badan caag cad ama madow, iyadoo ku xiran qaabka, iyadoo tafaasiisha qaar ka mid ah cagaarka caadiga ah ee calaamadda.
Cabirrada: 31 x 27 x 27 cm
Miisaanka Qiyaasta: 3,6 Kiilo
Sida inta badan qalabkan korantada, ee uu xukumo sharciga Isbaanishka, wuxuu leeyahay dammaanad laba sano ah oo lagu hagaajinayo cilladaha wax soo saarka.
Qiimaha moodelkan waa qiyaastii 44 euro ku dhawaad, mid ka mid ah kuwa ugu jaban ee aad ka heli karto suuqa. Guji xiriirinta soo socota si aad u hubiso qiimaha hadda ee qalabkan.
Xusuusnow Qaabkan shiilaya hadda lama heli karo.
Madow Degdeg ah oo is haysta
Mashiinka qoto dheer Madow
Fryer-cunto oo u oggolaanaysa in lagu kariyo hal qaado oo saliid ah, taasoo lagu gaaro natiijooyin caafimaad leh
Natiijooyin aan fiicneyn oo ku jira dhammaan cuntooyinka cuntada ayaa ugu mahadcelineysa tignoolajiyada hawada kulul ee fiican; Waxay leedahay shaqada foornada oo ay ugu mahadcelinayso dambiisha oo lagu daray qalab ahaan
Barnaamij lagu samayn karo wakhtiga iyo heerkulka; ku kari ilaa 400 garaam oo baradho ah hal mar
Waxay leedahay heerkulbeeg ilaa 200º; waqtiga lagu hagaajin karo 0-30 min
1,5 litir weel; wuxuu leeyahay buug-cunto
Cadaan degdeg ah oo is haysta
Iibka waxaad ku heli doontaa waxaad u baahan tahay si aad uga faa'iidaysato:
Fiidiyowga soo socda waxaan ku tusineynaa sida aad wax ugu karsan karto, iyada oo loo marayo dhowr tillaabo oo fudud.
Inkastoo shiilan qoto dheer waxay leedahay fikrado wanaagsan isticmaalayaasha iibsaday, runtii aad bay u yartahay in la xukumo. Waa lagama maarmaan in la falanqeeyo sifooyinkeeda iyo shaqeynteeda, la barbar dhigo moodooyinka kale ka dibna qiimee haddii ay u noqon lahayd doorasho wanaagsan jikadaada.
Waxaan wajahaynaa nooc aad u jaban oo ah ku habboon isticmaaleyaasha aan u baahnayn awood weyn oo raba qalab fudud lagu darayo kaliya ikhtiyaarada saxda ah ee karinta saliid yar oo aan dhib lahayn.
▷ Faa'iidooyinka iyo khasaaraha Cecotec Rapid
▷ Miiska Isbarbardhigga
Jadwalka soo socda waxaad ka arki kartaa isbarbardhigga moodelkan iyo kuwa kale ee la midka ah. Macluumaadka laga yaabo inay faa'iido u yeeshaan go'aan qaadashada
Haddi sifooyinka iyo shaqada Fryer-kan caafimaadka qaba ay ku qanciyeen, waxaad hadda ka iibsan kartaa isku xirka soo socda.
Ku iibso qiimaha ugu fiican
(Codadka: 70 Celcelis: 3.7)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Cecotec » Degdeg ah oo is haysta
5 faallooyin ah "Cecotec Compact Rapid"
19 / 10 / 2020 at 11: 38
Waxaan ka fekerayaa inaan iibsado shiilan saliideed oo bilaash ah waxaanan ka helay maqaalkan mid waxtar leh. Mahadsanid!!!
26 / 02 / 2021 at 21: 21
Maqaalkani waa kan kaliya ee caddeeyay shakigayga ku saabsan in aan aadi karo makiinada weelka dhaqda (dambiisha, waa la fahmay) sababtoo ah ma qeexayo ama buug-tilmaameedka. Mahadsanid.
16 / 03 / 2021 at 09: 54
Caadi ahaan qaybahan ayaa mar hore loo diyaariyey in lagu dhaqo weelka weelka lagu dhaqo dhib la'aan.
28 / 02 / 2021 at 21: 02
Ma sheegi karo farqiga farsamo ee u dhexeeya Cecofry Compact Rapid White iyo Cecofry Compact Rapid Sun. Xataa summada ma garan...
Waa moodallo isku mid ah. Mid ka mid ah dhinaca hoose ee Cecotec ayaa si sax ah u ah, kaas oo bixiya noocyo badan oo la mid ah (ama xitaa isku mid ah) iyo dhamaadka taas oo abuurta jahawareer macaamiisha.